Maitiro ekugadzira imba otomatiki imba neArduino nhanho nhanho | Mahara emahara
Maitiro ekugadzira imba otomatiki nhanho nedanho
Una home automation imba ine masisitimu maviri, yemukati system uye yekunze system, iyo anoshandiswa kuyera, kutonga uye kugadzirisa zvese zvinoitika zvine chekuita neimba. Kuti zvibudirire izvi, zvishandiso zvine hungwaru zvakabatana nemaitiro anounganidza ruzivo rwatinoda uyezve anopindura kune zvatinokumbira.
Kubudirira kweiyo otomatiki epamba mumwedzi ichangopfuura kuri kukonzerwa nenyaya yekuti mutengo wemidziyo iyi wadonha zvakanyanya uye nekutenda kune Mahara Hardware, chero chishandiso chinogona kuchinjiswa kune chero mhando yeimba kana mamiriro. Zvinhu izvo zvatinogona kana kuzvivaka isu pachedu.
1 Ndezvipi zvinhu zvandinoda kugadzira yangu yekushandisa pamba?
2 Chii chandinofanira kuita kuti ndigadzire smart mwenje?
3 Chii chandinofanira kuita kuti ndichengetedze imba yangu otomatiki?
4 Chii chandinofanira kuita kumhepo-inotonhorera imba yangu?
5 Chii chandinofanira kuita kushongedza imba yangu?
6 Maitiro ekuve nemudiri wemba yangu otomatiki?
7 Izvi zvinogona kuvandudzwa here?
Ndezvipi zvinhu zvandinoda kugadzira yangu yekushandisa pamba?
Tisati tataura nezve mini-mapurojekiti kana zvigadzirwa zvinozotibatsira kugadzira imba yedu yekushandisa, isu tichagadzira runyorwa rwezvinhu zvakajairika zvatichazoda kugadzira imba ino yekushandisa.
Chekutanga pane zvese kuve nacho router uye ine simba internet yekubatanidza iyo inoshanda mukati meimba, panogona kunge pasina nzvimbo dzakafa kana makamuri uko iyo chiito che router chisingakwanise kusvika. Muzviitiko zvakawanda hatizombodi kubatana neInternet, asi isu tinoshandisa rauta. Mune zvimwe zviitiko, sekuchengetedzwa kwemusha, isu tinoda mukana weInternet, saka zvese router neInternet kuwana zvakakosha.
Maitiro ekuona Netflix paRaspberry Pi
Chimwe chinhu chakajairika ndechekuti Raspberry Pi bhodhi. Kunze kwekudikanwa kwemamwe mapurojekiti, iyo Raspberry Pi bhodhi inogona kushanda sevhavha iyo inogadzirisa zvese zvikumbiro uye mirairo yezvakasiyana zvinhu zvine hungwaru. Iyo poindi yakanaka yekushandisa Raspberry Pi iri diki kukura kwayo, simba rayo nemutengo wayo wakaderera.
Arduino Yún uye Arduino UNO Vachavewo shamwari dzinodiwa kuti vagadzire yekushandisa pamba. Chero kudzora mashandiro emhepo inogadzirisa kana kudzora kukiya kwedhijitari, mahwendefa aya anodikanwa, anodhura uye anozivikanwa kwazvo.
ari sensor ivo zvakare vanozove anodikanwa, asi mune ino kesi isu tinofanirwa kuve nemoyo murefu uye tichiziva kusarudza zvakanaka sensor sezvo ichave iri yedu smart imba, inoshanda zuva rese, mazuva mazana matatu nemakumi matatu nemashanu pagore, zvinoreva kuti hapana chero mhando kana mhando ye sensor inoshanda.
Iyo ramangwana remba otomatiki ndeyekuti inoshanda kuburikidza nemirairo yezwi, asi parizvino izvo hazvishande munzvimbo dzese uye kune akawanda zvinhu isu tichafanira kuve nazvo smartphone ine internet kuwana. Muzhinji, ini ndinokurudzira kushandisa Android smartphone sezvo vazhinji vagadziri vachishanda zvakanyanya neiyi sisitimu yekushandisa pane neApple yeIOS.
Raspberry Pi mapurojekiti
Chii chandinofanira kuita kuti ndigadzire smart mwenje?
Kuvhenekerwa kweimba inodzora zvimwe ndizvo zvakawanikwa zvakanyanya mumakore achangopfuura. Chaizvoizvo tinazvo mhando dzakasiyana dze smart bulbs dzinogona kuiswa mune chero mwenje uye nekubatana kwakanaka, tinogona kuchinja mwenje uye kugadzira nharaunda dzakasiyana zvichienderana nenguva yezuva kana zvatinofarira. Parizvino aya smart bulbs anouya nemutengo mukuru, zvinoreva kuti havazi vese vanogona kukwanisa kuve nemabhubhu ese erudzi urwu.
Imwe nzira yeiyi kushandisa RGB yakatungamira mwenje uye ubatanidze ivo kune Arduino Yun bhodhi, neizvi tinogona kudzora mwenje wemba mumba medu. RGB yakatungamirwa mwenje yakachipa kwazvo pane smart bulb uye chimiro chatinogona kupa chinonakidza kupfuura nebhuru rechinyakare, asi ichokwadi kuti girobhu racho rine gadziriso inokurumidza uye yakapusa.
Chii chandinofanira kuita kuti ndichengetedze imba yangu otomatiki?
Kuchengetedzwa kwemusha chinhu chisina kusimba uye chakakoshawo. Parizvino, kugadzira imba otomatiki pane akasiyana mapurojekiti e smart smart anovhura ne chigunwe chemunwe kana ne smartphone.
Nhanho yechipiri ichave yekuwedzera inofamba sensors mumakamuri ese kugadzira alarm yekumba, asi mapurojekiti aya haasi kushanda nemazvo. Chero zvazvingaitika, chengetedzo ichakamirira iyo otomatiki yekumba kunyangwe ini ndichiziva vazhinji vane avo vasina-kuchenjera dzimba vane matambudziko akafanana.
Chii chandinofanira kuita kumhepo-inotonhorera imba yangu?
Mhepo inotonhorera yeimba inonetsa yakaoma, asi zvakare mune yakajairwa imba. Chekutanga tinofanirwa kuona kuti imba yakachengetedzwa zvakanaka. Izvi zvakakosha nekuti nguva zhinji kwatichazoshandisa mweya wakangwara unenge usiri pamba uye kana isina kuvharirwa zvakanaka, tinotambisa kupisa kana kutonhodza mhepo nenzira isina basa uye pasina mhedzisiro inodiwa.
Kana tangove neimba yekushandisa imba yakasarudzika, tinofanirwa kuisa sensor ne Arduino Makaralı bhodhi mudzimba dzose. Ruzivo rwe tembiricha rwunozoendeswa kune yepakati komputa kana Raspberry Pi. MuRaspberry Pi isu tinoshandisa algorithms kuitira kuti kana iyo kamuri yasvika kune imwe tembiricha iyo yekugadzirisa mhepo kana kudziyisa kunoitwa.
Mune ino chikamu chemba otomatiki zvinonetsa kuzadzikiswa sezvo ma air conditioner nema hita haane hungwaru uye nzira chete yeiyi kusarudza mhinduro dzezvemari dzinodhura uye dzisinganyanyoenderana nehumwe hutekinoroji. Chero zvazvingaitika, padiki padiki kufambira mberi kuri kuitwa mune ino chikamu chemba otomatiki.
Chii chandinofanira kuita kushongedza imba yangu?
Pakutanga isu takataura nezve maitiro ekugadzirisa mwenje kana kuti sei kuva nemagetsi magetsi. Tinogona zvakare kugadzira tambo yemimhanzi inosangana nemwenje, nokudaro tichigadzira nharaunda dzinosanganisa mwenje nemumhanzi. Mhinduro inokurumidza pane ino kuva nemutauri akangwara.
Muchinhu ichi pane akawanda mamodheru atinogona kutenga akadai seAmazon Echo, Google Kumba kana Sonos. Asi isu tinogona zvakare kugadzira yedu smart mutauri. Kune akawanda mapurojekiti ari kuyedza kugadzira smart speaker. Panyaya iyi, gudzanzwi rinobuda pachena. Google yakapa pamwe chete neRaspberry Pi Zero. Mhinduro ine simba, yemahara uye isingadhuri pane mamwe maspika akangwara. Kana isu tikasarudza yemahara mhinduro, isu tinofanirwa ramba uchifunga kuti isu tichazoda hombe yekuchengetera kuchengetedza mimhanzi.
Maitiro ekuve nemudiri wemba yangu otomatiki?
Zvinoshamisa, chimwe cheakanakisa maficha akaitwa mune yekumba otomatiki ndiko kugadzirwa kweanenge vabatsiri. Kubudirira kwavo kwave kwakadai zvekuti vakaunzwa kumafoni efoni, mapiritsi uye zvimwe zvigadzirwa.
Kuti tive nemudiri kana mubatsiri chaiwo tinofanirwa kuve neArtificial Intelligence yakaiswa mukati yepakati server kana pane Raspberry bhodhi iyo yakabatana kune ese akangwara zvishandiso. Kune akawanda mahara dzimwe nzira senge Jasper o Mycroft kana isu tinokwanisa zvakare kusarudza mhinduro dzemakambani senge Alexa kubva kuAmazon Echo kana Google Mubatsiri kubva kuGoogle Kumba. Sarudzo ndeyako.
Izvi zvinogona kuvandudzwa here?
Ehe inogona kuvandudzwa. Muzvinhu zvakawanda zvatataura vane nzvimbo zhinji yekuvandudza asi mune zvimwe zvatisina kuratidza, sei mukuvhenekesa, kune zvakare nzvimbo yekuvandudza uye kugadzirisa.
Zvese zvinoenderana nekwedu, imba yedu uyezve ruzivo rwedu neFree Hardware. Muzviitiko zvakawanda tinogona kugadzira zvakasarudzika uye akangwara zvishandiso zvinogadzirisa dambudziko kana kugadzira imba otomatiki zvine hungwaru, ndiyo yakanakisa yeFree Hardware Haufungi here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mahara emahara » Arduino » Maitiro ekugadzira imba otomatiki nhanho nedanho
Basa rakanaka rakandibatsira zvakanyanya
Gadzira mutauro wako wega kune morse kodhi muturikiri
LCD skrini uye Arduino